Vaovao farany momba ny famaranana I-Prize farany an'ny | Martech Zone
Talata, Jona 24, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ho anao izay mampifaly anay amin'ny fifaninanana I-Prize an'ny Cisco:
Finaliste an'ny I-Prize an'ny Cisco, Ankasitrahanay ny faharetanao ary fantatray fa miandry am-pitaintainana ny valiny ianao. Mila mangataka aminao izahay hiaritra aminay ary miandry a herinandro vitsivitsy kokoa.
Cisco Tena nahafinaritra ny niara-niasa tamin'ity dingana ity. Efa a traikefa tsara ho antsika ary manantena ny valiny izahay!
Ho eto izahay, Cisco!
Tags: cisco i-lokacipo iprize
Jun 24, 2008 ao amin'ny 12: 56 PM
Wow, ahoana ny tsy fahitan'ny kintana an'ity lahatsoratra ity? Volom-borona goavambe eo amin'ny satron'i Indianapolis hanana finalist amin'ity fifaninanana ity. Gaga aho fa tsy nasehon'izy ireo anao sy ny ekipanao, satria ny ezaka ataonao dia hanatsara ny orinasa ankehitriny na hanome ny voa ho fanombohana mamiratra amin'ny hoavin'i Indiana afovoany. Tardy arahaba soa!
Jun 24, 2008 ao amin'ny 1: 58 PM
Misaotra Madcap! Manana namana vitsivitsy aho amin'ny The Star ary fantatro fa fantatr'izy ireo… saingy mety ho sarotra ny manao lahatsoratra amin'ny mpiasa iray nitarihanao varavarana ka nahatratra ny lalao famaranana tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. 😉
Jun 24, 2008 ao amin'ny 1: 25 PM
Mampalahelo fa tsy manampy zana-bola izy ireo noho ny fiandrasana anao ela! Mampifaly anao izahay!
25 Jun 2008 amin'ny 9:05 AM
Miaraka amin'ny BN aho. Mahaliana azafady.
Ataovy vaovao hatrany izahay!